တုမ်ယမ်းဟင်းအနှစ်ပြု လုပ်နည်း ~ သဘာဝရဲ့အာဟာရ
ထိုင်းတုမ်ယမ်ဟင်းရည်မှာ...တုမ်ယမ်းဟင်းအနှစ်ရှိနေခဲ့မယ် ၊ပါဝင်ပစ္စည်းလည်းပြည့်စုံနေမယ်ဆိုချက်တာက(၁၀) မိနစ်ထက်အချိန်ပိုမပေးရပါဘူး..။
ကြံသကာအနှစ်( palm sugar)....... ၁ /၂ခွက်(.............။............)
သကြားအညို .............................၁/၄ ခွက်(..............။...........)
မန်ကျည်းမှည့်အနှစ်တိုက်................၁ ၁/၂ ခွက်(..........။............)
ပထမဆုံးပုစွန်အဆီပါသောခေါင်းတွေကိုကြော်ပြီးအအေးခံပါ ၊ ကြိတ်စက်(သို.)ဆုံမှာထောင်းပြီး..ပုစွန်အဆီတွေရအောင်ပြု လုပ်ပါ။
ငရုတ်ခြောက်တောင့်(၂) မျိုးကို မီးအေးအေးမှာသီးသန်.စီလှော်ပြီး( အရောင်
မမည်းသွားစေရန်သတိပြု ) အမှုန်.ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပါ။
ကြက်သွန်နီ၊ ဖြူ တွေကိုမှုန်ညှက်နေအောင်စဉ်း(သို.) ကြိတ်ပါ။
အခြားပုစွန်ခြောက်မှုန်. ၊ မန်ကျည်မှည့်ရေစိမ်တာတွေကိုလည်းလိုအပ်သလို
အားလုံးအဆင်သင့်ဖြစ်ရင်..အိုးတစ်လုံးမှာဆီကိုအပူပေးပြီး..ဖြူ ၊ နီ ကိုဆီသတ်ပါ။
ပုစွန်ခြောက်မှုန်.၊ ငါးပိ တို.ထည့်ပြီးအနှစ်ကျအောင်ချက်ပါ။
ငရုတ်သီးလှော်မှုန်. ၊ သကြား ၊ ကြံသကာအနှစ် ၊ ငါးငံပြာရည် ၊ မန်ကျည်းအနှစ်၊ ဆား စတာတွေကိုတဆင့်ချင်းစီထည့်ပေးသွားပါ။
လုံးဝရေခမ်း ၊ ဆီပြန် ၊ အနှစ်ကျသည်အထိ ချက်ပြီး..အအေးခံပါ။
Photo Credit ..larahayes.com.